SP-L10M SOICARE 400ml voan-kazo goavam-be ultrasonic Aromatherapy fotsy Bluetooth mpandahateny mpanaparitaka menaka manaparitaka, China SP-L10M SOICARE 400ml voan-kazo lehibe ultrasonic Aromatherapy fotsy blu Bluetooth mpandahateny solika diffuser mpanamboatra, mpamatsy, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L10M SOICARE 400ml voan-kazo goavam-be ultrasonic Aromatherapy fotsy Bluetooth mpandahateny mpanaparitaka menaka manaparitaka
SOICARE 400ml varimbazaha hazo goavam-be ultrasonic Aromatherapy fotsy Bluetooth mpandahateny mpanaparitaka menaka manaparitaka
· [Fanaraha-maso Wireless App & V4.2 Bluetooth Speaker]: Aromatherapy diffuser dia haingana sy marin-toerana hampifandray ny Bluetooth finday ao anatin'ny 13ft. Izy io dia miaraka amin'ny feo stereophonic ambony & feo avo manodidina ny trano. Fametrahana famantaranandro, fanaraha-maso ny zavona, mpilalao mozika, fanaraha-maso maivana amin'ny fampiharana. Ny mpandahateny dia azo ampiasaina misaraka. Mifanaraka amin'ny Android 4.3+, iOS 4.0+ (Tohano ny telefaona finday rehetra ankoatry ny telefaona Google) tokony handrehitra Bluetooth ny iOS & hampifandray ilay diffuser alohan'ny hisintomana ny 'Aromalife' APP.
· [400ml Capacity lehibe sy asa maro]: Fielezana aroma sy fiasa roa mandrehitra, azonao atao ny manampy menaka esansiela vitsivitsy ao anaty rano, aorian'ny segondra vitsy dia ho feno fofon'ny menaka manitra. Fiarovana ny tontolo iainana tanky rano PP, manakana amin'ny fomba mahomby ny fahasimban'ny menaka manitra ary maharitra. Ity diffuser fofona ity dia mety haharitra 10 ora amin'ny fatran'ny rano 400ml. Teknolojia ultrasonic namboarina, mangingina ity diffuser ity rehefa miasa.
· [Lighting Control]: Vary Grain Vatana sy sarontava voaloboka voninkazo poakaty, jiro ary zavona miakatra izay mahatonga anao hahatsapa ho toy ny ao anaty zaridaina nofinofy mifono mistery mahatalanjona foana. Ny loko dia azo alefa amin'ny bisikileta na apetraka amin'ny loko iray voafaritra. Fampisehoana jiro tsy manam-paharoa manodidina ny takela-by, mora apetraka amin'ny fampiharana, hahazo loko mifanaraka amin'ny filanao samihafa ianao.
· [Diffuser Mist Cool Cool]: marefo kokoa sy malefaka kokoa ny tsifotra, manatsara ny fiarovana ary manatsara ny fofon'ny menaka manitra tena Mahomby ary miparitaka mifanaraka. Fampiasana Auto-Off tsy misy rano, Rehefa lany ny rano dia hikatona ho azy ny diffuser. Tsy misy hafanana ampiasaina, mahatonga azy io ho azo antoka ho an'ny ankizy sy ny biby fiompy.
· [Fanomezana tonga lafatra]: Ny fampiharana aromatherapy dia afaka manamaivana ny tebiteby sy ny fahaketrahana, manatsara ny kalitaon'ny fiainana sy ny torimaso. Ity diffuser menaka manitra aromatherapy ity dia misy voan-kazo maoderina toy ny ravina haingo. Fanaraha-maso fampiharana azo entina, jiro miloko. Tonga lafatra ho an'ny Lehilahy sy vehivavy ao amin'ny biraon'ny trano sy orinasa. Safidy tsara ny fampiasana an'ity diffuser mahafinaritra ity ho fanomezana ho an'ny namanao sy ny fianakavianao, ny olon-tianao.
Fanamafisam-peo Bluetooth, moisturifier, aromatherapy
Ny haben'ny boaty loko:
SP-G02 100ml diffuser seramika malaza
SOICARE 4L Humidifier Ultrasonic Air Capacity lehibe